त्यसपछि खुसी बोकेर फर्किए समीर - sailungonline
त्यसपछि खुसी बोकेर फर्किए समीर
नारायण ढुङ्गाना र अजयकुमार साह रासस
२६ असार २०७८, शनिबार १९:१० । धनुषा
उपचार खर्च तिर्न नसक्दा जनकपुरको एक निजी अस्पतालमा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–५ महेन्द्रनगर कुचाइटोलकी ३० वर्षीया सुत्केरी बेगम खातुन चार दिनदेखि अस्पतालकै शय्यामा थियो ।
सामान्य मजदुरी गरेर दैनिकी जुटाउने श्रीमान् मोहम्मद समीर नदाफले पैसाको जोहो गर्न गरिएको प्रयास विफल भएपछि शुक्रबार बाध्य भएर मिडियामा गुहार माग्न पुगे । राससमार्फत समाचार सार्वजनिक भयो । मिडियामार्फत जानकारी पाएर प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले तत्कालै चासो देखाइन् ।
असहाय, असक्त, अभिभावकविहीन तथा बेसहाराको सारथी बन्दै आएकी शाक्यले व्यक्तिगत रूपमा खर्च व्यहोर्ने आश्वासन दिएर स्थानीय प्रहरीमार्फत पहल गरिएको थियो । त्यसपछि बेगम घर फर्किन सफल भएको हो । ‘अनलाइमा पढेको र खोजी गर्दा कुरा सत्य भएको पत्ता लागेपछि तत्कालै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न लगाएको शाक्यले सुनाइन् ।
प्राप्त जानकारीअनुसार अस्पताल प्रशासनले नै बाँकी रकम मिनाहा गरिदिएर उनलाई घर पठाइएको हो । श्रीमती र बच्चा स्याहार्दै गर्दा आज रासससँगको टेलिफोन कुराकानीमा समीरले भने, ‘मेरो खुसी कति छ भन्ने कुरा कसरी भनौँ, सबैको सहयोगले सुत्केरी ल्याउन पाएँ उनीहरूलाई धन्यवाद भन्छु ।’
पहिले पैसा माग्ने अस्पताल प्रशासनले समेत अब पैसा पर्दैन जानुस् भनेपछि शुक्रबार जुम्ल्याहा बच्चा र श्रीमतीसहित घर फर्किएको सुनाउने मोहम्मदलाई कसले पैसा तिर्‍यो भन्नेबारेमा ज्ञान छैन । ‘पैसा सबै भइसक्यो, तपाईँ जानुस् भन्नुभयो, अनि घर हिँडेको”, उनले कुराकानीका क्रममा थपे ।
सुत्केरी बेथा लागेपछि गएको असार १७ गते बेगम अस्पताल भर्ना भएको थियो । शल्यक्रिया गरी जुम्ल्याहा बच्चा जन्मिएपछि असार २१ गते नै अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको तर अस्पताललाई एक लाख १० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा चार दिनदेखि उनी शय्या छाड्न पाएको थिएन ।
जन्मेपछि पनि एनआइसीयूमा राखेर नवजात शिशुको उपचार गर्नुपरेकाले उपचार खर्च बढेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । उक्त विषयमा राससमार्फत ‘सुत्केरी अस्पतालमा बन्धक स् श्रीमान् पैसाको खोजीमा भौँतारिँदै’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको केही घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्यलगायत मनकारीहरूबाट आवश्यक पहल सुरु भएको थियो ।
‘तपाईँहरूले मेरो परिवारलाई ठुलो गुन लगाउनुभयो, जिन्दगीमा भुल्दैनौँ, एउटा समाचारले हाम्रो लागि दुनियाँ नै बदलिएको महसुस गर्‍यो’, अस्पताल परिसरबाट जुम्ल्याहा बच्चासहित श्रीमती लिएर घर फर्कने क्रममा उनले भने ।
उनले झन्डै ६० देखि ७० हजार तिर्नु नपरेको उनले जानकारी दिए । दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका समिरको न आफ्नो घर छ र न त काम । दैनिक ज्याला मजदुरी गरी हातमुख जोर्ने गरेका उक्त परिवारलाई धेरै दिन निषेधाज्ञाका कारण काम नपाएर छाक टार्न मुस्किल परेको थियो ।
कोरोना महामारीबाट प्रभावित भइरहेका बेला अस्पतालको उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा उनीमा दोहोरो पीडा थियो । उता समयमै पैसा सङ्कलन नहुँदा अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बिल दैनिक बढिरहेको थियो । समीर पैसा खोज्न चन्दा सङ्कलन गर्दैगर्दा उपचार खर्च मिनाहा गर्ने घोषणाले ठुलो राहत मिलेको समीरले सुनाए । आफूसँग भएको थोरै पैसा सकेपछि उनी चन्दा सङ्कलनमा लागेको हो ।
आर्या केयर अस्पतालका व्यवस्थापक उज्ज्वल झाले सुरुमा कुनै जानकारी नभए पनि समाचार आएपछि खोजबिन गर्दा गरिब परिवारको मान्छे भएर पैसा मिनाहा गरेको बताए । ‘आर्थिक अभावमा चन्दा सङ्कलन गरिरहेको थाहा पाएँ, अनि लागेको खर्च छुट गरेर, घर पठाएका हौँ’, उनले भने। अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै छुट गरेको जनाएको छ । बेगमले आवश्यक सहयोग प्राप्त हुँदा ठुलो खुसी मिलेको सुनाए ।
१. टिकट बनाउदा सेतीमा खसेकी युवतीको शव भेटियो
२. तालिबान सरकारले छात्रालाई चाँडै विद्यालय फर्काउने
३. नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि
४. सन् २०२२ को सुरुदेखि जापानमा खोपको थप मात्रा दिइने
५. अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा रोहिङ्गा शरणार्थीलाई नेपाल भित्र्याउने गरेको खुलासा
६. आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु